विराट हस्पिटलको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट करिअर सुरु गरेका विराटनगरका ३७ वर्षीय महेश बाहेती अहिले जयश्री समूहको ‘कन्ट्री हेड’को पदीय जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।
आर्थिक समृद्धिको बाधक अस्थिर राजनीति
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२÷७३मा आर्थिक वृद्धि ६.५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, आर्थिक वृद्धिदर ०.७७ प्रतिशत रहने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रक्षेपण गरिसकेको छ ।
‘संघर्ष गर्दै अघि बढेको हुँ’
वीरगञ्जका रूपेश पाण्डे नेपालमा कपडाका अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड भित्र्याउने उदीयमान व्यवसायी हुन् । पाण्डेसँग शुक्रवारका लागि दिलीप पौडेलले गरेको कुराकानीः
दुई अर्बको मोबाइल व्यापार
दैनिक जीवन सञ्चालनको सारथी बनेको ‘मोबाइल’ प्रयोगकर्ताको वृद्धिसँगै यसको व्यापार फस्टाएको छ । सञ्चार सूत्र मात्र नभई विभिन्न एप्सको माध्यमबाट हरेक सूचनाको जानकारी पाउने भएपछि मोबाइल जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको छ । व्यक्तिले प्रयोग गरेको ‘मोबाइल सेटको ब्रान्ड’लाई आफ्नो प्रतिष्ठाको रूपमा समेत हेर्न थालेपछि महँगामहँगा मोबाइल नेपाली बजारमा भित्रिएका छन् । नेपाली बजारमा १५ सय रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म चर्चित ब्रान्डको प्रवेशले यसको व्यवसाय बढेको हो । परिवारका सदस्य पिच्छे मोबाइल, आफूलाई ‘स्मार्ट’ देखाउन चाहने र व्यस्त हुने हरेक व्यक्तिले दुई मोबाइल सेट बोक्न थालेकोले पनि माग वृद्धि भएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, रोजगारदाता परिषद्, सुजल फुड्सलगायत व्यावसायिक क्षेत्रमा आबद्ध अञ्जन श्रेष्ठ अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा)का अध्यक्ष हुन् । हुन्डाई कम्पनीको नेपालको आधिकारिक विक्रेता श्रेष्ठसँग शुक्रवार साप्ताहिकले गरेको कुराकानीः
छाक टार्नै गाह्रो
घरपरिवारको खर्च चलाउन सप्तरीबाट काठमाडौँ आएका राजेश ऋषिदेवलाई बिहानबेलुका छाक टार्न हम्मे छ । ज्यालादारी काम गर्ने ६० वर्षीय ऋषिदेव दिनानुदिन बढ्दो महँगीबाट दिक्क छन् ।
१० रुपैयाँमा सर्ट !
कास्की, लामाचौरका ४३ वर्षे चिजमान गुरुङ यतिबेला निकै व्यस्त छन् । व्यस्त हुनुको कारण हो, उनले सुरुवात गरेको नयाँ व्यवसाय । १० रुपैयाँमा नै सर्ट बिक्री गर्न थालेपछि उनको व्यवसाय हेर्ने र किन्नेको भीड लाग्न थालेको छ ।
एउटा किन्दा अर्को सित्तैमा
एप्पल वल्र्ड मोबाइल प्रालिले एसएलसी परीक्षाको नतिजा आएको अवसरमा एलजीको एल ६० मोडल खरिद गर्दा अर्को सोही मोबाइल उपहार दिने योजना ल्याएको छ । गत आइतवारदेखि सुरु भएको उक्त योजनाअन्तर्गत चौधरी ग्रुपसँगको सहकार्यमा एप्पल वल्र्ड मोबाइल प्रालिले ल्याएको उक्त योजना स्टक रहुन्जेलसम्म चल्ने जनाएको छ । ‘एक किन्दा अर्को मोबाइल फ्री’मा उपलब्ध गरिने यो एल ६० मोडलमा थ्रीजी, वाइफाई, एन्ड्रोइड ४.४.२ किटकाट अपरेटिङ सिस्टम, डुअल कोर प्रोसेसर र ३२ जीबीसम्म स्टोरेज एक्सपान्ड गर्न सकिनेजस्ता फिचर रहेको कम्पनीले जनाएको छ । ९ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ मूल्य तोकिएको यो फोन किन्दा अर्को फोन सित्तैमा दिने व्यवस्था एप्पल वल्र्ड र यसका आउटलेटबाट मिलाइएको एप्पल वल्र्डका प्रबन्ध निर्देशक अलाइभ ग्लाइडरले जानकारी दिए ।
धादिङमा जन्मिएर गाउँको विद्यालयबाट स्कुले शिक्षा लिएका डा. राजेन्द्र केसी अमेरिकामा उच्च शिक्षा हासिल गरेर स्वदेशकै शिक्षा क्षेत्रमा योगदान पु¥याउन फर्किएका व्यक्ति हुन् ।
निजीमा लगानीको ओइरो
एसएलसीको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै निजी कलेजलाई दश जोड दुई (प्लस टू) मा विद्यार्थी तान्न भ्याइ–नभ्याई छ । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्याकेज राखेपछि निजी कलेजमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ ।
‘रेमिटेन्स अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको छैन’
कार्गो व्यवसायबाट व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेका बागलुङका चन्द्र ढकालले रेमिटेन्स, बैंकिङ, अटोमोबाइल, सञ्चार, हाइड्रो, पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । पछिल्लो पटक ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’का रूपमा काठमाडौँ, चन्द्रागिरीमा केबलकार निर्माणको नेतृत्व लिएका आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष ढकालसँग शुक्रवारका लागि गरेको कुराकानीः
जियोनीको ‘मिनी नेपाल’ मोबाइल
‘जियोनी’ ब्रान्डको मोबाइल कम्पनीले नेपाली ग्राहकको लागि ‘मिनी नेपाल’ नयाँ ‘प्रडक्ट’ ल्याएको छ । कम्पनीले कम मूल्य र धेरै सुविधा भएको ‘एम फाइभ मिनी नेपाल’ बजारमा ल्याएको हो । उक्त मोबाइलमा पाँच इन्चको स्क्रिन, आठ मेगापिक्सेलको रियर क्यामेरा र पाँच मेगापिक्सेलको फ्रन्ट क्यामेरा रहेकोले फोटो राम्रो आउँछ । मोबाइलमा १.३ गिगाहर्जको क्वाड कोर प्रोसेसर छ ।
नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भारी
पर्याप्त आम्दानी नभएपछि साहुसँग ऋण लिएर घरव्यवहार चलाउने प्रचलन नौलो होइन । ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरी मनग्य आम्दानी गरेर ब्याजसहित ऋण तिर्छन् । ऋणको सही सदुपयोग गर्न नसकेर डुबेका घटना पनि उत्तिकै भेटिन्छन् ।